AddShoppers: Social Azụmahịa Ngwa Platform | Martech Zone
AddShoppers: Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Social
Na Tọzdee, Septemba 24, 2013 Na Tọzdee, Septemba 24, 2013 Douglas Karr
Tinye ngwa na - enyere gị aka ịkwalite ego na - elekọta mmadụ, tinye bọtịnụ nkekọrịta ma nye gị nchịkọta na otu mmekọrịta mmadụ na ibe ya si emetụta azụmahịa. AddShoppers na-enyere ndị na-enye ọrụ ecommerce aka ịkwalite mgbasa ozi mmekọrịta iji nwekwuo ahịa. Mkparịta ụka ha na-ekerịta, ụgwọ ọrụ mmekọrịta, na ịzụta ihe ndị a na-emekọrịta na-enyere gị aka ị nweta mbakkọrịta mmekọrịta nke nwere ike ịbawanye na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Tinye nchịkọta -enyere gị aka soro nloghachi gị na ego na ịghọta nke na-elekọta mmadụ ọwa tọghatara.
Tinye na-eme ka ndị ahịa na-emekọrịta ihe site na ijikọta nkwalite mmekọrịta ọha na eze na ngwaọrụ nkekọrịta mmekọrịta. Na mgbakwunye na ịbawanye njikọ, njikọ nke nkwalite mmekọrịta ọha na eze na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-enyere aka belata ịgbahapụ ịzụ ahịa ịzụ ahịa na ịbawanye ọnụego ntụgharị.
Ngwa ndị na-eme ka ụlọ ahịa ịntanetị gị na-elekọta mmadụ
Smart Social Media bọtịnụ mee ka ọ dị mfe ịbawanye okporo ụzọ gị na ahịa site na ndị na-elekọta mmadụ. Mbadamba bọtịnụ ha na-enyere ndị ahịa gị aka ịkesa ngwa ngwa ka ha nwee ike ịkekọrịta ngwaahịa ha masịrị ha na netwọk mmekọrịta kachasị amasị ha.
Socialgwọ Ọrụ enyere gị aka ịbawanye ngwaahịa na-elekọta mmadụ site na ịmepụta mmemme mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na ịkwalite ojiji iji kekọrịta bọtịnụ. Ngwa a na - enye aka ịbawanye ọnụego ntụgharị site na ịbelata ịhapụ ụgbọ ibu azụmahịa na igbe onyinye.
Nchịkọta Mmadụ enyere gị aka ịghọta ọrụ mmekọrịta gị na ụlọ ahịa site na ịchụso ọrụ ịkekọrịta niile na-eme site na ụlọ ahịa gị. You nwere ike ịhụ ugboro ole ejirila ngwaahịa ọ bụla, ndị kesara, kedu ọtụtụ clic ọ bụla akụrụngwa, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Social ROI Ndepụta enyere gị aka ịghọta uru nke omume mmekọrịta na ụlọ ahịa gị. Iji ngwa a, ị nwere ike ịlele uru nke Like, Tweet, Pin, na omume ndị ọzọ dị.
AddShoppers Shazụta Ekekọrịta enyere ndị ahịa gị aka ịkọrọ ndị enyi ha ihe ha zụtara.
Chọta Wall (Pro) ngwa na-eme ka ọ dị mfe itinye mgbidi nke ngwaahịa gị kachasị na saịtị gị. Hapụ ndị ahịa gị ka ha chọpụta ngwaahịa ka ha na-ada na ezigbo oge na ntanetị.
Banye Nbanye Social (Pro) jikọtara ọdịiche dị n'etiti nbanye mmadụ na eCommerce nbanye. Ọgụ akakabarede-egbu ndebanye iche site na-enyere a enweghị nkebi ihe ịrịba ama na maka gị ahịa na tupu jupụta ubi. Mee ka ihe omuma ndi ahia gi na ihe ndi mmadu me.
Tinye na-agbanye ihe karịrị $ 1,000,000 kwa ọnwa na ahịa mmekọrịta. Ha na - enyere data ntinye aka nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na API na inye nghọta miri emi nye ndị na - eme ihe. Uzo ha mechiri emechi nke ROI na enye ohere ka ndi n’eme ka ha kerita mgbe, ebe, na otu ha choro ma ha gha eme ka otutu uzo nke nkwalite na nkwalite iji kwalite nkwuputa ndi ahia.
Tinye ugbu a mepụtara njikọta na Klout, Wishpot, RJ, Metrics, Rapleaf, Bronto, Google, Analytics, MailChimp, SilverPop, Vertical, Response, ExactTarget, Strong, Mail, Listrak, WordPress, Accenture, Omniture, Site, Catalyst, Xing, LinkedIn , tumblr, Kaboodle, Polyvore, StumbleUpon, Google+, Twitter, Pinterest, NetSuite, Zoho, Salesforce, hubspot, pardot, Marketo, eloqua, Act-On, Tagman, tealium, ensighten, google, tag, manager, openbravo, openerp, sap , address-address, coremetrics, brighttag, CubeYou, Emma, ​​Marketing, Piwik, Wish, Wanelo, Webimax, Adobe, Storm, Tag, Manager, Lexity, Webtrends, Epicor, Sage, ERP, Oracle, JD, Edwards, Microsoft, Dynamics , GP, SAP, Azụmaahịa, Otu, IBS, Enterprise, Intacct, Svpply, Responsys, na CheetahMail.
Tags: AccentureNa-aga n'ihutinyechippersadobeAnalyticsgbamgbamBrontoazụmahịaỌkpụkpụCheetahMailadreesị jikọọisi iheCubeYouDynamicsecommerce na-elekọta mmadụ n'elu ikpo okwuEdwardsokwuEmmaileba anyaenterpriseEpicorERPkpachaara anyagoogle +GPokpokoroIBSEtinyeghiJDKaboodlekloutlexityLinkedInNdepụtamailmailchimpmanagermarketingahịametricsmicrosoftnetsuiteomnitureOneogheOpenERPOraclemgbagharaPinterestPiwikPolyvorerapaịResponsenzaghachiRJsagendị ahịasapSilverPopSiteazụmahịa azụmahịaoké ifufeStrongsụọ ngọngọOnyekamkpadoonye mkpadoTealọmtumblrTwittervetikalWaneloWeebụwebụsaịtịNa-achọIhe ndoziWordPressXINGZoho
Ihe mere WordPress gị Ga-eji Kwadoro